(src)="21"> Avatud rakendusliides ( API )
(src)="48"> Avatud rakendusliides ( API )
(src)="79"> Avatud rakendusliides ( API )
(trg)="25"> Magaaladda agteeda qasrigga Turku ( Turun linna ) oo muhiim u ahaa awoodda ugu muhiimsan ee saldhigga u ah Finland agagaarkeeda .
(trg)="26"> Difaac siinta qasrigaasi isagoo jiraa xataa magaaladdu marar badan waxay noqotey goob dagaal .
(trg)="27"> Saldhigga Turku ee boqortooyadda barigga iswidhishka waxay awood yeelatey qarnigii-1600 , markii la aasaasey iskuulo badan- iyoxarumo dawladeed .
(trg)="28"> Tusaale ahaan dawladda hoose laga asaasey Turku sanadkii 1617 oo markii ugu horeysey maxkamadda rafcaanka ee Finland la furey sanadkii 1623 kii .
(src)="29"> Rootsi kuninganna andis 1640.aastal käsu asutada Turusse Soome esimene ülikool , Turu akadeemia .
(trg)="29"> Boqoradda iswidhishka ayaa amartey in laga aasaaso Turku Finland markii ugu horeysey jaamacad , akademiyada Turku , sanadkii 1640 kii .